လမ်းမပေါ် မစင်ထွက်ကျတဲ့ ချစ်သူလေးကို၊ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်သူကောင်လေး - Real Gaming Myanmar
လမ်းမပေါ် မစင်ထွက်ကျတဲ့ ချစ်သူလေးကို၊ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်သူကောင်လေး
ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောတာကို ကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသူတွေအဖို့ တစ်ခြားလူရဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ ရယ်စရာပါဘဲ။ လူကြားထဲမှာ မစင်တွေ ထွက်ကျတာကို ရယ်မယ့်အစား၊ တစ်ဖက်က တွေးကြည့်ရင်လည်း သူတို့မှာ ကြွက်သားထိန်းချုပ်မှုအားနည်းနေလို့၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်နေလို့ ဒီလိုဖြစ်ရှာတာလို့ တွေးသင့်ပါတယ် …. ။ အခုလည်း ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ သွားလာလည်ပတ်ရင်း အများသုံးသန့်စင်ခန်းကိုတောင် ရောက်အောင် မသွားနိုင်ရှာဘဲ၊ မစင်တွေက ထွက်ကျကုန်ပါတော့တယ်။ ကောင်မလေးက (၁၉)နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုင်ဝမ်က လမ်းမတစ်ခုမှာ အခုလို ဖြစ်ခဲ့တာပါ …. ။
ဒီအချိန်မှာ သူမရဲ့ ကောင်လေးက နှာခေါင်းတရှုံ့ရှုံ့နဲ့ ရွံတဲ့မျက်နှာပေး ပေးရမယ့်အစား၊ မရွံမရှာနဲ့ တစ်ရှူးတွေ၊ ရေတွေနဲ့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ ဒီကိစ္စကို ကောင်မလေးကိုယ်တိုင်က လူမှုကွန်ရက်မှာ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခဲ့တာပါ။ တကယ်တော့ ရှက်စရာ ကိစ္စဆိုပေမယ့်- သူမရဲ့ချစ်သူ သဘောထား ကြီးမြတ်ပုံကို အများသိစေလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့အပြောအရ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အရမ်းစပ်တဲ့ပင်လယ်စာကို အားရပါးရ စားသောက်ပြီးပြန်အလာ ဗိုက်ထဲမှာ ရစ်နာလာပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ လုံးဝမထိန်းနိုင်ပဲ ကောင်လေးရဲ့ကားထဲကို ဝင်မယ်အလုပ်၊ ကားခုံတွေ ပေကုန်မှာကို စိုးတာကြောင့်၊ သူမက ကားပေါ်မတက်တော့ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ မစင်တွေက ထွက်ကျကုန်ပါပြီ။ ကောင်လေးက ကားပေါ်တက်ဖို့ ပြောသော်လည်း သူမက ဘက်စ်ကားပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအနားမှာ အများသုံးအိမ်သာက မလွယ်တဲ့အတွက် အိမ်ကိုပဲ ပြန်ရမှာပါပဲ …. ။
ကောင်လေးကလည်း သူမနဲ့အတူ ဘက်စ်ကားပေါ် လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူလည်း တက်နိုင်သလောက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူမက မကူညီဖို့ပြောသော်လည်း ကောင်လေးက ကြင်ကြင်နာနာ လုပ်ပေးခဲ့တာမို့ စိတ်ထဲမှာတောင် ကြိတ်ပျော်မိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ အားအင်ကုန်ခမ်းနေပြီမို့ ဆရာဝန်ခေါ် ဆေးကုခဲ့ရပါတယ်တဲ့ …. ။
Previous: အိပ် ပုတ် ကြီး တဲ့ သ မီး လေး တွေ ကို စိတ် ရှည် ရှည် နဲ့ နှိုး နေ တဲ့ မေ မေ ချစ် ​သု ​ဝေ ရဲ့ ဗီ ဒီ ယို ….
Next: လူ တိုင်း သိ ထား သင့် သော ” အ ပြာ ကား ကြည့် ခြင်း ” ကောင်း ကျိုး ဆိုး ကျိုး သိ မှတ် ဖွယ် ရာများ …